Archanthropines - kuyafana ukuthi we Homo erectus ekugcineni kwaba, okusho zinhlobo ezimbiwa phansi labantu ibhekwa njengeBhayibheli kokumethemba lendoda wanamuhla. Ngokusho ezingeni ukuziphendukela kwemvelo, zingabantu eduze komuntu kunanoma inkawu, futhi umele kokuqala isinyathelo anthropogenes.
Lingobani leli qembu?
Ngaphambili kwakucatshangwa ukuthi archanthropines - uhlobo Homo erectus ekugcineni kwaba, i yokuqothulwa mayelana iminyaka 300,000 edlule. Namuhla, ososayensi baye bathola ubufakazi bokuthi ukhona eminye iminyaka eyinkulungwane 18 edlule. Nakuba ukubonakala abantu asendulo ayenamagama kuningi abafana ne nezinkawu, kodwa kukhona ayesevele iveza izimpawu inqubo yokuziphendukela kwemvelo.
Umsuka nokuma kwezwe zokuhlala
Kusolwa ukuthi archanthropines uvele eMpumalanga Afrika eminyakeni engaba ngu-2 million edlule. Lolu hlobo kwakuvamile Old World, lapho kwakukhona eziningana zenyathi yakhe. izidumbu zawo lwamathambo eziye zatholakala, kuhlanganise eRussia. Ngo Voronezh, Kaluga, nezinye izindawo eziningana zembuliwe, futhi wathola amathuluzi okwakungokwenkosi abantu endala - archanthropines. I geography zokuhlala kwabo kwakuhlanganisa Eastern Ephakathi eSiberia, North-Minusinsk nomcengezi esigodini Yenisei.
Archanthropines babe nokukhula naphakathi (1.2-1.5 m), futhi waba ngqo Gait zakudala skull isakhiwo esinezindonga obukhulu nebunzi ongaphakeme ophumile lwesikhathi supraorbital
Ukuvela indoda ekuseni
Ngemva ukwehlukana wokugcina Australopithecus archanthropines isikhathi eside nangendlela ezibukeka ngayo kwakuhluke kakhulu kulokho abantu yesimanje, nakuba kwemvelo oyizalayo waba uqanduqandu. Ikakhulukazi ngokushesha ukuthuthukisa ingqondo, aba nesandla ekuthuthukeni kwalo ushintsho esime ugebhezi. Ezinye izindaba zika-skeleton uye savela okuningi kancane. inkulumo stroke uvinjelwe apharathasi ongakasetshenzwa amaculo abantu eminingi yasendulo.
Amathuluzi we Trade
Ngaphezu kwalokho, archanthropines - abantu basendulo ngubani savela emzimbeni hhayi kuphela. amathuluzi yakhe ayizuzile ngokuhamba kwesikhathi entsha, amafomu okuthuthukile. amathuluzi ejwayelekile zabantu lasendulo - umshini wokusika ibhukwana kanzima uchwepheshe banamuhla. Ngaphezu ngamathuluzi ekhiqizwa njengoba izinkuni nesijula. Babenza imisebenzi esemqoka abebezingela futhi ubutha.
Archanthropines - indoda lasendulo ababekwazi ukwakha amathuluzi zokuhlala ezingezinhle. Izinsalela maqhugwane atholakele e-France (yokupaka Terra Amata). Ukushintsha kwesimo sezulu baphokophelele archanthropines beyofuna amakhaya amasha, ngokuvamile ahlala emigedeni nasemigedeni enamadwala. Nezingubo ngabo abangu isilwane izikhumba etholwe abazingeli. Ososayensi bakholelwa ukuthi laba bantu basendulo kakade wayazi ukuthi ukukhiqiza kanye nokugcina ilangabi.
Iyini imiphumela eminingi etholakale kwendawo?
Isitembu pad zokunyathelisa
Izibungu e amakati futhi kanjani ukuthatha bayolwa.